Xigashooyinka Kaniisadda Weyn ee Ugu Weyn Taageerayaasha Ma iloobi Doono! - Kale
Liiska ugu Weyn Kannaan Xigashooyin Mudnaan Wadaag ah
Kanaan anime xigasho laga soo qaaday jilayaasha:
Kancaan waa taxane ficil oo la mid ah Dhiigga +. Waxaa soo saaray P.A Works (Shirobako).
anime waxay muujineysaa in lagu daawado ingiriisiga loogu magac daray
Anime-ku ma haysto xigashooyin badan oo ah Dhiig + ama isbarbar dhigyo muujinaya, laakiin xigashooyinka ayaa wali mudan in lala wadaago Oo ujeeddo yar haysa.
1. Hadallada Maria Oosawa
“Kanaafuu waliin jira. Jiritaankeeda ayaa si aad ah u ifaya. Aad u dhalaalaya indhaha qaawan si toos ah u eegaan… xoogaa waan baqayaa, laakiin waxaan rabaa inaan taabto. Waxaan rabaa inaan taabto dhalaalkeeda. ” - Maria Oosawa
jeexan nolosha ugu fiican anime
“Waxaan aaminsanahay inay jiraan waxyaabo badan oo adduunkan ka jira oo dadku aysan weli arkin. Haddii aad runtii rabto inaad wax aragto, ma jiraan wax aanad arki karin. Ma arki kartid maxaa yeelay waxaad u jeeddaa indhahaaga. Sababtoo ah haddii aad isticmaasho indhahaaga si aad u aragto, waxay noqon doontaa xanuun, iyo murugo. Taasi waa sababta ay uxiran yihiin marka hore. Waxaan u maleynayaa in sawirku yahay sida amaahda qof kale indhaha. Marka xitaa haddii indhahaagu xiran yihiin… waad amaahan kartaa qof kale. ” - Maria Oosawa
2. Xigasho Kancaan
“Waa inaadan waligaa ka quusan nolosha, si kasta oo aad dareento. Si kasta oo aad u xun ee aad u rabto inaad u dhiibto. ” - Kancaan
3. Siam Duurjoogta
jeex wanaagsan nolosha jacaylka anime
“Kancaan. Waxaad tahay dhibane taariikhdiisii ​​hore dagaal ku qaaday. Waana qof laga adkaaday oo waayihiisii ​​hore ku lumiyay loolan awoodeed. Askarta ku dhasha burburka gudihiisa, waxay nacayb u qaataan hubkooda. In kasta oo adiga iyo iyada aad askar isku mid u noqoteen, haddana labadiinuba si kala duwan ayaad u nooshihiin. Dhageyso Kancaan, kama hortagi kartid nacaybka nacayb weligiis. ” - Siam
72 + xigashooyinka Astaamaha Feegaarka ah ee kaa dhigi doona inaad ka fikirto nolosha
18+ xigashooyin Dhiig maskaxeed C ah oo lama ilaawaan ah
anime la mid ah lagu sameeyo yaamayska
30 Waraaqaha Anime ee Waxyi Leh Waxaad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso
34 + Xigashooyinka Ugu Wanaagsan Nanbaka ee Sii Qoto Dheer
10 Junichirou Kagami Xigashooyin Laga Buuxiyay Casharro Nolosha Ciyaaraha Casharrada iyo Waxyi
Tani waa waxa Kyoto ka dhigaya animation-ka KALA DUWAN Studio-yada Kale ee Anime!
Qoraaga Manga wuxuu kufsaday naasaha gabdhaha, haddana waqti kuma qaadan doono Jeelka
6 Waqtiga aan layaabka laheyn ee aadan awoodin inaad si dhab ah u qaadato
Cunnooyinka inta badan la wadaago ee 'Shounen' Waxaad Waligaa ku arki doontaa Anime
Dhibaatada Burcad Badeedka Anime Iyo Sida Looga Baahan Yahay In Loo Xaliyo Si Horay U Socota
Liiska ugu Quirkiest ee xigashooyinka ka soo baxa 'FLCL' ee aan Waqtiga lahayn
Kekkai Sensen's XIISAHA ​​XIISAHA ​​BADAN EE Waqtiga oo dhan (Dhiig-xireenka Dhiigga)
jeex nolosha anime on hulu
wuxuu ku jecel yahay jacaylka franxx
anime ugu fiican dhamaan waqtiga liiska
Copyright © Xuquuqda Daabacaadu Way Xifdisan | mechacompany.com